Izigebengu zishayise 3 wezingane zibalekela amaphoyisa | News24
Izigebengu zishayise 3 wezingane zibalekela amaphoyisa
Johannesburg - Beziqeda ukubamba inkuzi isitolo sezimphla zokugqoka izigebengu zase zishayise izingane ezintathi ngesikhathi zibalekela amaphoyisa.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Mega Ndobe uthe abasolwa abane babambe isitolo sakwaPEP enxanxathela yezitolo zaseLetsoho eKatlehong eKurhuleni ngopLwesihlanu zabaleka nemali eyisamba esingadalulwanga.
“Izigebengu zibaleke ngemoto yohlobo lwe-Opel Astra emhlophe ngesikhathi zigijinyiswa ngamaphoyisa.”
OLUNYE UDABA: Izigebengu zibambe inkunzi esontweni
UNdob uthe ngesikhathi abasolwa bebaleka ngemoto emgwqeni uBuurman eduzane naseChris Hani Mall bashayise intombazane eneminyaka engu13 ubudala badlula baphinde bashayisa enye intom,bazanebalelwa emnyakeni engu-13 ubudala nayo ngaphambi kokushayisa umfana naye oneminyaka engu-13 ubudala.
“Abaoslwa bashiye imoto ekhoneni lomgwaqo uBuurman noTalani eVosloorus base bebaleka ngezinyawo beshiya isikhwama semali ngemuva."
Akukaboshwa muntu kanti izingane ziphuthunyiswe esibhedlela iThelle Mogoerane eVosloorus nge-ambulensi, kubika iDaily Sun.